6 Tips uyonga Xa Train Travelling EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 6 Tips uyonga Xa Train Travelling EYurophu
6 Tips uyonga Xa Train Travelling EYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/01/2020)
Ngeminazana ithile, xa ibhajethi akazange adlale indima ngokukhetha zokufikela (okanye ubuncinane, hayi njengento enkulu indima!) izinto lula; kule mihla, ukuba sifuna ukuhamba, kufuneka sibe smart kunye indlela ngayo uhlahlo lwabiwo-mali lethu. Nangona uloliwe ohamba eYurophu-lwabiwo-friendly khetho ezininzi bonke abafuna ukuba 'umdla (nangokukhulula!) indlela yokuya, apho basengaba iimeko isipaji-yingxaki ufuna angasondeli nokusondela.
ke, ukuba akuncede ufumane okuninzi yokuhamba kwakho, esiyiqalileyo kunye uluhlu oko ocinga ukuba imali phezulu iingcebiso ukuba uloliwe abahambahambayo eYurophu ukonga.
Musa ezinika kwi Peak Holiday Times
Ewe, lo mntu kufuneka aye ngaphandle esithi, kodwa akukho nto imbi ezikukhumbuza kube kanye kwakhona. Xa kufikwa ukuqeqesha abahambahambayo eYurophu, iiholide ufuna angasondeli nokusondela ngokuyintloko Christmas, Nyaka omtsha, Easter kwakunye ngenyanga ka-Agasti. Ngenxa yesizathu, i amaxabiso sinyuke kule nyanga, njalo ... ukusebenza ngeenxa zonke kubo kancinane.
Nangona ngokucebisa na ukuhlola amazwe aseYurophu ufuna ukubona i uhlobo unfair kwaye iyintsomi, esiyenzayo ukuze inzuzo yakho. Uloliwe ehamba eYurophu, uya kufumanisa ukuba yonke into kwi isiphelo lasentshona indlela ibiza ngaphezu ibloko empumalanga. ke, de wallet yakho sikhula, ikhanda East nokuphonononga nobuhle nganeno Europe!
PHAWULA: Xa e Eastern Yurophu, qinisekisa ukuba uyeke yi Prague (Umphakathi waseCzech), Budapest (Hangari), Belgrade (Sebhiya), Bucharest (Romaniya), Zagreb and Split (Khroweyishiya), Zakon (Bhozniya neHerzegovina) yaye eMoscow (Rhashiya).
Nuremberg ku Prague Uqeqesha
Kuphephe Class 1 Xa Uloliwe Travelling eYurophu
Well, igaqa! kunjalo, musani kuba ngomnye ABO kubahambi "ngempazamo" kuhlala eklasini 1. Ngoba? Ngenxa uzakuphela ukuhlawula isohlwayo eninzi kakhulu ukuba abanjwe oya kuhlawula ngaphezu iklasi itikiti 1 ngokwayo!
Incwadi Ebusuku Trains ukuba Uloliwe Travelling eYurophu phakathi kwamazwe
oololiwe Overnight, Mfaz Omnyama oololiwe ebusuku zezona kakhulu Kukwayidlela egaxabisi kakhulu ukuba baseYurophu. Hayi nje wena kwi intengo embhedeni kodwa kwakhona ukufumana ukuba iYurophu evela entsha nombono.
Well, ngokoqobo ipikniki kodwa 'wayeyifihla "lokutya ekhaya, ngoko akuyomfuneko ukuba bathenge ukutya eninzi ababekhwele. Uya konga imali eninzi xa Stock phezu ephatha kwivenkile!
Kuphephe Amatikiti Buying Advanced kuhambo Imihlathana phakathi wase-Europe
Xa uloliwe ohamba eYurophu, ukuba uhambo short ukuba pricier kwabo elide; kunjalo, kukho inzuzo yokungabi kwincwadi kwangaphambili leyo isongeza ukuba kungabikho bungqingqwa uhambo lwakho kunye ukonga kwalo. Xa uhambela injalo naseYurophu unako ukuthenga itikiti kwisikhululo ngaphambi kokukhwela kwinqwelo kuloliwe.
Gcina-A-Train yeyona ndlela ingcono ukubhukisha kwiindawo kwamnandi ngamazinga cheap kwaye ukonwabele uloliwe wakho uhamba eYurophu neqhekeza ingqondo.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tips-train-traveling-europe/ - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba umnikazi website, uxhume ku wethu RSS Feed.
europeantravel europetravel amacebiso train Travel traveltips
Indlela Ukuhamba To Norway Ingaba Amava Travel Different
Qeqesha uhambo eNorway, Travel Europe
Kutheni Train Ride yindlela Best Ukuze Bona Italy
10 Uhambo Usuku Ukusuka Florence By Train